Ukusuka kwi-MD's Desk | Ukufumana iOudisha Tours & Travels
Namaskaar! ... Nezaziso evela ezweni leNkosi uJagannath ...
IBhubaneswar - isixeko seetempile; Inkulu-dolophu yeOdisha yilizwe lam. I-Odisha, eyongezwa ngelifa lemveli, ifa lezakhiwo kunye neengcambu ezifihliweyo zenzeka ukuba yimoya yaseIndiya. Iitempile ezihle, iimpawu eziphawulekayo, iziqithi ezinqabileyo, iindawo zokuhlala zendalo zasendle kunye neepaki zelizwe, izidalwa ezinamahlathi ezifudukayo echibini laseCchilika zidibanisa kwiindwendwe ezininzi.
Ndandibonakaliswe ngokubanzi ukusuka ebuntwaneni bam neengxaki. Oku kwashukumisela ukuba ndiphuhlise eli shishini kwaye ndiphande ukuphumelela kwezinga elipheleleyo elingakhuthaza ngokwenene ikhefu okanye ukuhlanganiswa kweendwendwe. Leyo yindlela apho "i-Dream Child" Yendwendwe yeNtshontsho yokuTyelela 'i' Ihambo (I) i-Pvt Ltd yafika ukubonakala.
Ngamava am kunye nokubandakanyeka kweli shishini, ndinegunya lokuqokelela iqela labasebenzi abalungiselele kwaye abanamava abaza kuhamba ngokugqithiseleyo ukunyamekela ukuba bahambise iindwendwe zethu ngeyona ndlela efanelekileyo yokuhamba ngamava. Namhlanje sisasaze amaphiko ethu ukuya eNew Delhi naseKolkata kwaye sisebenza kwiimitha ezihlukeneyo zaseIndiya ngokuzithandela ngeSebe lezoKhenketho, uRhulumente we-Odisha kunye noRhulumente waseIndiya.
Yonke into enhle kubo bonke kwaye ulindele ukukwamukela kwi-Odisha